Mapato eMDC Oronga Kusvitsa kuSADC Nyaya yeMazuva eSarudzo
WASHINGTON DC — Mutauriri webato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vanoti bato ravo ringangokwira kuSADC kuti imanikidze mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo reZanu PF kuti vatevedzere mitemo yesarudzo inotsigirwa nebumbiro idzva remitemo yenyika.
SADC iri kuitarisirwa kuita musangano muMozambique wekuzeya nyaya yeZimbabwe musi wa 9 Chikumi. Izvi zvinotevera mutongo wedare repamusorosoro wekuti nyika inge yaita sarudzo musi wa 31 Chikunguru asati apfuura.
VaMwonzora vanoti bato ravo harisi kushushikana nemazuva ekuita sarudzo kwete, asi kuti nekusazadziswa kwemisaridzirwa iripo yakaita sekuvandudzwa kwemitemo, pamwe nekupiwa kwemikana nenhepfenyuro dzehurumende kupa mamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro.
NeSvondo VaMugabe vakazivisa vari kuJapan kuti vachatevedzera mutongo wedare, uye vakati gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vachatanga svondo rino kugadzira nyaya yemazuva ekuita sarudzo.
NeMugovera hutungamiri hweMDC T hwakasunga kuti hucharemekedzawo mutongo wedare uyu, kunyange hazvo mazuva ekuita sarudzo achiri iwo ane nyaya iri kunetsa.
MDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube inotiwo iri kushushikanawo nemutongo wedare repamusororo.
Mugwaro raburitswa nemunyori mukuru webato iri, Amai Priscilla
Misihairambwi-Mushonga, MDC inoti mutongo wakatarwa nedare iri hauremekedzi zvido zvevanhuvanodarika mamiriyoni matatu vakavhotera bumbiro idzva.
Vanotiwo mutongo uyu unotadza zvakare kuremekedza mazuva makumi matatu anodiwa kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota, zvikuru vanhu vanga vachitadziswa kuvhota nemitemo yekare.
Vanotiwo mutongo weSupreme Court uyu unorasa kodzero dzevanhu dzakachengetedzawa mubumbiro idzva.
Bato iri rinoti rinoshushikana kuti seyi nyaya iyi yakanzwiwa nevatongi vapfumbamwe, ichiti vatongi vapfumbamwe vanofanirwa kutanga kugara sedare kana mutungamiri mutsva asarudzwa, uye agadzwa.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari sachigaro weNational Constitutional Assembly, NCA, Professor Lovemore Madhuku, vanotiwo kuenda kumasangano ekunze hakuna zvako kuipa, kana chete kusiri kuenda kwekuti zvinonotse kuitwa kwesarudzo.